Home » Featured » ATTO sy AVID: Fiaraha-miasa voafaritra ho an'ny 20 taona
Atto Technology, Inc.., nanambara fa ny azy ireo ThunderLink® 40GbE ary 10GbE ThunderboltTM Ny adiresy 3 sy 40GbE FastFrameTM Network Interface Cards (NICs) dia nohamarinina ho ampiasaina amin'ny farany mazotoNy vondron'orinasa solosaina samirery NEXIS®.
"Ny ATTO ThunderLink adapters sy ny Network Interface Cards dia manana toerana tsara mba hanomezana ny fifandraisana 40GbE sy 10GbE farany mazoto NEXIS and mazoto NEXIS | Ny vahaolana fitahirizana PRO, " hoy i Ed Harper, lehiben'ny Product Manager ao amin'ny mazoto Technology. "Amin'ny alalan'ity fanamarinana ity, ireo mpamorona votoaty miasa ao amin'ny macOS®, ny Windows sy Linux dia manome toky amin'ny safidy feno sy manohana ary manara-penitra tanteraka amin'ny fikarakarana ny fepetra takian'ny angon-drakitra momba ny fampiasana ny media dizitaly."
Ny fanamarinana ny vahaolana 40GbE sy 10GbE noporofoina tanteraka dia sady fiaraha-miasa nahomby teo amin'ny ATTO sy mazoto miompana amin'ny 20 taona. Fiaraha-miasa izay nahatonga ireo matihanina mpitsikilo mba hiasa haingana kokoa, tsara kokoa, ary amin'ny fahatokisan-tena. Ireo ATTO ThunderLink fitaovana sy ny FastFrame NIC dia manome safidy tsara amin'ny fifandraisana ho an'ireo mpampiasa mitady fitahirizana rakitra ho an'ny lahatsary miaraka amin'ny 4K sy 8K. Ny fitaovana ATTO 40GbE sy 10GbE Thunderbolt 3 dia mampifandray ireo endri-tsoratra ATTO izay manatsara ny fifandraisana ho an'ny mpampita vaovao farany ao Thunderbolt, anisan'izany ny Apple iMac® sy iMac ProTM. Ny ATTO 40GbE NIC dia manitatra ny safidy mifandraika ahafahan'ireo mpampiasa Windows® sy Linux® hanatsara ny fampiasana tsara indrindra ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny fotoana mahamety izany.
"Ny vondrona mazoto ny tahiry iombonana sy ny ATTO Ethernet Thunderbolt adapters ary ny Network Interface Cards dia mamela ireo mpanjifa mora hampiditra workstations ao amin'ny tontolo iainana avo lenta, " hoy Tom Kolniak, tale lefitra momba ny varotra ao amin'ny ATTO Technology. "Raha mivoatra ny drafitr'asa mba handraisana fanapahan-kevitra ambony sy tahan'ny rafitra, ny mpampiasa dia mitaky ny fahombiazan'ny solosaina vaovao."
Tandremo tsara ny mitsidika ATTO Technology, Inc. at #IBC2018 Boina 7.A26. mazoto at #IBC2018 boina 7.B55
Ho an'ny 30 taona, ATTO Technology, Inc. dia mpitarika eran-tany manerana ny tsenan'ny IT sy ny fampahalalam-baovao & fialam-boly, izay miompana amin'ny fitehirizana sy ny fifandraisana an-tariby ary ny vahaolana momba ny fotodrafitrasa amin'ny tontolo manodidina indrindra momba ny informatika. Miara-miasa amin'ireo mpiara-miasa i ATTO mba hamaha ny vahaolana farany amin'ny fitehirizana, fitantanana ary famoahana angona. Miasa ho toy ny fanitarana ny ekipa mpanjifa mpanjifa ny ATTO dia manamboatra mpanamboatra fitaovana ho an'ny mpampiantrano sy ny RAID, ny adiresin'ny tambajotra, ny solosaina, ny adiresy ThunderboltTM, ary ny rindrambaiko. Ny vahaolana ATTO dia manome fifandraisana avo lenta amin'ny interfaces rehetra, toy ny Fiber Channel, SAS, SATA, iSCSI, Ethernet, NVMe ary Thunderbolt. ATTO no hery ao ambadiky ny fitahirizana.
Efa niaraka tamin'ny olona foana ny tantara. Tantara mitantara amintsika. Mampahafantatra anay izy ireo. Izy ireo dia manazava antsika. Raha mbola misy olona, ​​dia hisy tantara. Ary raha mbola misy hevitra hizarana, dia hisy ny mpilaza tantara. amin'ny mazoto Manampy ny mpamorona hilaza ny tantarany isika. Ny haino aman-jery malaza, be mpijery indrindra sy tia indrindra manerana izao tontolo izao. Hatramin'ny nitarika ny revolisiona tamin'ny famoahana tsy manara-penitra momba ny 25 taona lasa izay, mazoto dia manohy mitodika any amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary mitazona patanty 200. mazoto Ny vahaolana dia nekena tamin'ny fampisehoana indostrialy sy teknolojia maro, anisan'izany Oscars® roa, Grammy®, ary 15 Emmys®.
mazoto SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows	2018-09-14
Previous: Ny Blackmagic Design dia manambara ny Kodeksa RAW vaovao
Next: Media Specialist, GG-0301-11 / 12, Fanisam-bahoaka-EXT-KTE
Archives Select Month Janoary 2019 (177) Desambra 2018 (243) Novambra 2018 (406) Oktobra 2018 (496) Septambra 2018 (495) Aogositra 2018 (397) Jolay 2018 (876) Jona 2018 (869) May 2018 (871) Aprily 2018 (831) March 2018 (779) Febroary 2018 (684) Janoary 2018 (605) Desambra 2017 (396) Novambra 2017 (712) Oktobra 2017 (835) Septambra 2017 (608) Aogositra 2017 (583) Jolay 2017 (710) Jona 2017 (543) May 2017 (621) Aprily 2017 (695) March 2017 (704) Febroary 2017 (340) Janoary 2017 (364) Desambra 2016 (606) Novambra 2016 (344) Oktobra 2016 (556) Septambra 2016 (622) Aogositra 2016 (1056) Jolay 2016 (532) Jona 2016 (414) May 2016 (505) Aprily 2016 (713) March 2016 (743) Febroary 2016 (382) Janoary 2016 (123) Desambra 2015 (357) Novambra 2015 (327) Oktobra 2015 (152) Septambra 2015 (259) Aogositra 2015 (440) Jolay 2015 (276) Jona 2015 (140) May 2015 (128) Aprily 2015 (435) March 2015 (289) Febroary 2015 (298) Janoary 2015 (131) Desambra 2014 (103) Novambra 2014 (194) Oktobra 2014 (149) Septambra 2014 (381) Aogositra 2014 (250) Jolay 2014 (287) Jona 2014 (363) May 2014 (231) Aprily 2014 (744) March 2014 (560) Febroary 2014 (427) Janoary 2014 (289) Desambra 2013 (137) Novambra 2013 (545) Oktobra 2013 (290) Jolay 2013 (26) May 2013 (13) Aprily 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)